Rheumatic Fever (လေးဘက်နာ အဖျား ) - Hello Sayarwon
Rheumatic Fever (လေးဘက်နာ အဖျား )
Rheumatic Fever (လေးဘက်နာ အဖျား ) ကဘာလဲ။
Rheumatic အဖျား ဆိုတာဟာ အကင်းသေအောင် မကုသလိုက်တဲ့ လည်ချောင်းနာ ဒါမှမဟုတ် အဝါရောင်အဖျား ရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ လည်ချောင်းနာ ဒါမှမဟုတ် အဝါရောင်အဖျားရောဂါတွေဟာ streptococcus ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။Rheumatic အဖျားရောဂါဟာ အသက် ၅နှစ်ကနေ ၁၅နှစ်အရွယ် ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီထက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာလည်း ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့ ရောဂါတမျိုးပါ။Rheumatic အဖျားရောဂါဟာ နှလုံး အဆို့ရှင်တွေ ပျက်စီးတာ၊နှလုံး အလုပ်မလုပ်တော့တာတို့အပါအဝင် (ပြန်ကောင်းမလာနိုင်တော့တဲ့) နှလုံးထိခိုက်မှုတွေကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ ကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ထိခိုက်မှုတွေကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း၊နာကျင်မှုအပါအဝင် တခြားသော ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေခြင်း၊Rheumatic အဖျား နောက်တကြိမ် ပြန်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Rheumatic Fever (လေးဘက်နာ အဖျား ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Rheumatic Fever (လေးဘက်နာ အဖျား ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Rheumatic အဖျားရောဂါ ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
အဆစ်အမြစ်များ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း __ဒူးဆစ်၊ခြေကျင်းဝတ်၊တံတောင်ဆစ်နဲ့ လက်ကောက်ဝတ်တွေမှာ အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
နာကျင်ခြင်းဟာ အဆစ်တခုကနေ နောက်တခုကို ကူးပြောင်းရောက်ရှိသွားနိုင်ခြင်း။
အရေပြားအောက်ခြေမှာ (နာကျင်ခြင်းမရှိတဲ့)အဖုလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။
ပုံမှန်မဟုတ်သော နှလုံးခုန်သံများအား ကြားလာရခြင်း။
အနားမညီညာသော အနီစက်များ ထွက်လာခြင်း (နာကျင်မှုမရှိ၊ခပ်ပြားပြား သို့မဟုတ် အနည်းငယ်ကြွနေတတ်သည်)။
မိမိစိတ်နဲ့ ထိန်းချုပ်လို့မရသော ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း __ လက်၊ခြေထောက် နဲ့ မျက်နှာတွေမှာ အများဆုံး ဖြစ်ပွားပါတယ်။
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း (ဥပမာ အကြောင်းမဲ့ရယ်ခြင်း၊ငိုခြင်း တို့နဲ့အတူ ပုံမှန်မဟုတ်သော ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း) စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Rheumatic အဖျားရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေက အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ လက္ခဏာအနည်းငယ် ဒါမှမဟုတ် အများအပြားကို ခံစားရနိုင်သလို ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလမှာကိုပဲ ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။Rheumatic အဖျားရောဂါဟာ လည်ချောင်းနာပြီး ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်ကနေ လေးပတ်အကြာမှာ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Rheumatic Fever (လေးဘက်နာ အဖျား ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
group A streptococcus လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကြောင့် လည်ချောင်းပိုးဝင်ရောဂါဖြစ်ပွားအပြီးမှာ Rheumatic အဖျားရောဂါကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။Group A streptococcus ဘက်တီးရီးယားကြောင့် လည်ချောင်းနာဝေဒနာကို ခံစားရတတ်ပြီး တခါတရံမှာလည်း အဝါရောင် အဖျားရောဂါကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အရေပြား ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အခြားနေရာတွေမှာ Group A streptococcus ကူးစက်ခံရရင်တော့ Rheumatic အဖျားရောဂါ ဖြစ်ခဲပါတယ်။Rheumatic အဖျားရောဂါနဲ့ streptococcus ဘက်တီးရီးယား ဘယ်လိုဆက်စပ်လဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရပေမယ့် ဒီဘက်တီးရီးယားတွေက ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို လှည့်စားလိုက်တဲ့အတွက် ဖြစ်လာရတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။streptococcus ဘက်တီးရီးယားမှာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အချို့သော တစ်ရှူးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ ပရိုတင်းဓါတ်တမျိုးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ပရိုတင်းဓါတ် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ဘက်တီးရီးယားတွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်လေ့ရှိတဲ့ ခုခံအားစနစ်ရဲ့ ဆဲလ်တွေဟာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တစ်ရှူးတွေကိုပါ ရောဂါပိုးအမှတ်နဲ့ ချေမှုန်းဖျက်ဆီးပါတော့တယ် (အထူးသဖြင့် နှလုံး၊အဆစ်အမြစ်၊အရေပြားနဲ့ ပင်မအာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းရဲ့ တစ်ရှူးတွေကိုပေါ့)။ ဒီလို ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်ပြီဆိုရင်တော့ inflammation လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်တစ်ရှူးတွေ ထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်ပွားစေပါတော့တယ်။
တကယ်လို့ သင့်ကလေးအနေနဲ့ strep ဘက်တီးရီးယားပိုးကို တိုက်ထုတ်ကုသဖို့အတွက် ပဋိဇီဝဆေးဝါးကုသမှုကို အလျင်အမြန် ခံယူခဲ့မယ်၊ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ ဆေးတွေအားလုံးကို အပြည့်အဝ သောက်သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ rheumatic အဖျားရောဂါအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ချေ အင်မတန်နည်းပါးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရင်သွေးလေးမှာ လည်ချောင်းနာခြင်း၊အဝါရောင်ဖျား ကူးစက်ခံရခြင်း စတဲ့ အခြေအနေတွေကို တကြိမ်ဒါမှမဟုတ် တကြိမ်ထက်ပိုပြီး ခံစားခဲ့ရမယ်၊အဲ့သလို ခံစားခဲ့ရချိန်တွေမှာလည်း ဆေးဝါးကုသမှု လုံးဝမခံယူခဲ့ရဘူး ဒါမှမဟုတ် ဆေးပတ်လည်အောင် အပြည့်အဝ ကုသမှုမခံယူခဲ့ရဘူးဆိုရင်တော့ rheumatic အဖျားရောဂါဖြစ်နိုင်ချေတွေ ရှိနေပါတယ်။
Rheumatic Fever (လေးဘက်နာ အဖျား ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Rheumatic အဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း : တချို့လူတွေဟာ Rheumatic အဖျားရောဂါကို ပိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ မျိုးဗီဇပစ္စည်းတွေကို သယ်ဆောင်ထားတတ်ပါတယ်။
strep ဘက်တီးရီးယား အမျိုးအစား ကွဲပြားခြင်း : တချို့ strep ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ အခြား strep ဘက်တီးရီးယား မျိုးစိတ်တွေထက် Rheumatic အဖျားရောဂါကို ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအရာများ : လူဦးရေထူထပ်ခြင်း၊ပတ်ဝန်းကျင် မသန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ strep ဘက်တီးရီးယား အလွယ်တကူ ပျံ့နှံ့စေ၊ထိတွေ့စေနိုင်တဲ့ အခြားသော အခြေအနေတွေကြောင့်လည်း Rheumatic အဖျားရောဂါကို ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Rheumatic Fever (လေးဘက်နာ အဖျား ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Rheumatic အဖျားရောဂါ ဟုတ်မဟုတ်ကို စစ်ဆေးမှုတခုတည်းနဲ့ အတည်မပြုနိုင်ပေမယ့် ရောဂါရာဇဝင်ကို မေးမြန်းခြင်း၊ခန္ဓါကိုယ်အား စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း နဲ့ အခြားလိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်ပြီး ရောဂါကို အဖြေရှာအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
သွေးစစ်ခြင်း : တကယ်လို့ သင့်ကလေးမှာ နဂိုကတည်းက strep ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်နေတာကို သိရှိထားမယ်ဆိုရင် ဒီပိုးအတွက် ထပ်မံစစ်ဆေးဖို့ မလိုပါဘူး။ တကယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က သွေးထပ်စစ်ခိုင်းတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကလေးရဲ့ သွေးထဲမှာ လည်ပတ်နေတဲ့ strep ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးမယ့် ပဋိပစ္စည်းတွေကို ရှာဖွေဖို့ အဓိကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တကယ့် ဘက်တီးရီးယားအကောင်ကို သင့်ကလေးရဲ့ လည်ချောင်းတစ်ရှူး ဒါမှမဟုတ် သွေးထဲမှာ တွေ့နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ကလေးရဲ့ ရောဂါအခြေအနေကို သိနိုင်ဖို့အတွက် C-reactive protein လို့ခေါ်တဲ့ ပရိုတင်းတမျိုးကို တိုင်းတာမှာဖြစ်ပြီး erythrocyte sedimentation rate အမည်ရှိတဲ့ စစ်ဆေးမှုတခုကိုလည်း ပြုလုပ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အီးစီဂျီဆွဲခြင်း : ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့ သင့်ကလေးရဲ့ နှလုံးကို ဖြတ်ပြီး စီးဆင်းသွားတဲ့ လျှပ်စစ်အချက်ပြသင်္ကေတလေးတွေကို မှတ်တမ်းတင် စစ်ဆေးကြည့်ရှုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်္ကေတပုံစံလေးတွေထဲမှာမှ နှလုံးရောင်ရမ်းခြင်း ဒါမှမဟုတ် နှလုံးရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပျက်ယွင်းခြင်းတွေကို ဖော်ပြနေတဲ့ အချက်ပြပုံစံလေးတွေကို သင့်ဆရာဝန်က ရှာဖွေမှာပါ။
Echo ရိုက်ခြင်း : ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့ နှလုံးရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အသံလှိုင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး နှလုံးမှာ တခုခုမူမမှန်တာရှိရင် သင့်ဆရာဝန်က တွေ့ရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Rheumatic Fever (လေးဘက်နာ အဖျား ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Rheumatic အဖျားရောဂါကို ကုသတဲ့အခါမှာ အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ group A streptococcal ဘက်တီးရီးယားတွေကို အပြီးအပိုင် ဖျက်ဆီးရှင်းလင်းပစ်ဖို့၊ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေဖို့၊တစ်ရှူးပျက်စီးရောင်ရမ်းခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ နဲ့ နောက်တခါ ထပ်ဖြစ်လာမှာကို ကာကွယ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများ : ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သုတ်သင်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ ပင်နီဆလင် ဒါမှမဟုတ် အခြားသော ပဋိဇီဝဆေးတွေကို ညွှန်ကြားပေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကလေးအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက် နဲ့ ပမာဏအတိုင်း ပဋိဇီဝဆေးကို စနစ်တကျသောက်ပြီးပြီဆိုရင် Rheumatic အဖျားရောဂါ နောက်တခါထပ်မဖြစ်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်အနေနဲ့ ပဋိဇီဝဆေး နောက်ထပ်တကျော့ ထပ်တိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ကလေးအသက်၂၁နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသောက်တဲ့ကာလအနည်းဆုံး ၅နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိ (ပိုကြာမယ့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရပါမယ်) ပဋိဇီဝဆေးတွေကို စွဲသောက်ရမှာပါ။Rheumatic အဖျားရောဂါဖြစ်နေစဉ်ကာလမှာ နှလုံးရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေအနေနဲ့ကတော့ ရောဂါကာကွယ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပေးတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးကို အနည်းဆုံးဆယ်နှစ်တိတိ စွဲသောက်ရပါမယ် (ဒီထက်လည်း ပိုကြာကောင်း ကြာနိုင်ပါတယ်)။
အရောင်အရမ်းပျောက်ဆေးများ : ရောင်ရမ်းခြင်း၊ဖျားနာခြင်းနဲ့ နာကျင်ခြင်းတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းဖို့အတွက် အက်စ်ပရင် ဒါမှမဟုတ် naproxen (Naprosyn) ကို သင့်ဆရာဝန်က သုံးစွဲခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက တော်တော်လေးဆိုးနေမယ် ဒါမှမဟုတ် ဒီဆေးတွေနဲ့ သင့်ကလေး မသက်သာလာဘူးဆိုရင်တော့ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်ဆေးတွေကို သောက်သုံးဖို့ သင့်ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားကောင်းညွှန်ကြားမှာပါ။
အတက်ကျဆေးများ : Sydenham chorea လို့ခေါ်တဲ့ မူမမှန် လှုပ်ရှားမှုတွေဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်လာတဲ့အခါ valproic acid (Depakene) ဒါမှမဟုတ် carbamazepine (Carbatrol, Tegretol)တို့လို အတက်ကျဆေးတွေကို သုံးစွဲဖို့ သင့်ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကလေးအနေနဲ့ ဘယ်လိုကုသမှုတွေကို ဆက်လက်ခံယူဖို့လိုအပ်မယ်၊ရေရှည်မှာ ဘယ်လိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ရမယ် စတာတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ရပါမယ်။rheumatic အဖျားရောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နှလုံးထိခိုက်မှုတွေဟာ နှစ်အတော်ကြာတဲ့အထိ လက္ခဏာပြသလေ့မရှိပါဘူး။ သင့်ကလေး အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ရောဂါရာဇဝင်မှာ အချက်အလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်သလို နှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှု ခံယူဖို့လည်း အထူးပဲ အရေးကြီးလှပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Rheumatic အဖျားရောဂါ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Rheumatic အဖျားရောဂါ ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးအနေနဲ့ အိပ်ယာထဲမှာပဲ သက်တောင့်သက်သာနားနေဖို့ ဆရာဝန်က အကြံပြုမှာဖြစ်ပြီး ရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်းတွေနဲ့အခြားသော လက္ခဏာတွေ သက်သာသွားတဲ့အချိန်ထိ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားဖို့လည်း သင့်ကို မှာကြားပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ နှလုံးတစ်ရှူးတွေမှာ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကလေးဟာ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကနေ လအနည်းငယ်အထိ အိပ်ယာထဲမှာပဲ အနားယူရပါမယ်(ဒါကတော့ ရောဂါပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်ပါတယ်)။ လည်ချောင်းပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ အဝါရောင်ဖျားရောဂါတို့ကို ခံစားရပြီဆိုရင် မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးကို အသုံးပြုပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ဆေးပတ်လည်တဲ့အထိ အတိအကျလိုက်နာသောက်သုံးခြင်းကသာ Rheumatic အဖျားရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့တခုတည်းသော နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatic-fever/home/ovc- 20261251. Accessed 13 Feb 2017.
http://www.healthline.com/health/rheumatic-fever. Accessed 13 Feb 2017.